मन्त्री भट्टराईको ढिलाई एक घन्टा कि १५ मिनेट ? – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
यो नेपालगञ्ज एयरपोर्टबाट उड्न ठिक परेको बुद्ध एयरको विमानभित्रको दृष्य हो । मन्त्री भट्टराईका कारण १ घण्टा जहाजमा कुर्नुपरेको भन्दै युवाहरुले हंगामा मच्याएका थिए । मन्त्री भट्टराई काठमाडौं आइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टिकरण दिए । आफ्नो कारणले १५ मिनेट ढिलाई भएको भन्दै उनले क्षमा मागेका छन् ।